Karazana tononandro iray manokana sy fizaran-taona ilay vaintisisy, ary tsara fitontona koa ilay izy satria eo no fanombohan'ny ririnina (eny e, boriboriana ilay 21 juin). Point de référence izy ho an'ny maro. Ka raha misy misambotra vola ohatra dia afaka miteny hoe alohanay alohan'ny vaintisisy. Raha fahavaratra izy no miteny an'io, ohatra hoe volana janoary, dia aza mieritreritra hoe 26 janoary ilay vaintisisy teneniny fa 26 jiona.
Dia rehefa vaintisisy dia misy fety iarahana. Mpandeha matetika eo amin'io tanàna io izahay ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nasaina manokana. Efa vita ny CEPE amin'io saingy antsoin'ny prezidà (sady prezidàn'ny fokotany io no prezidàn'ny fiangonana no ombiasa sns) daholo ny mpianatra rehetra hilahatra fa hoe ho avy ny vazaha (zahay io ). Eo amin'ny amin'ny 10 maraina eo izahay no tonga rehefa avy nanao lalana adin'ny telo tamin'ny Land Rover, nitety fantsiolitra (zavamaniry any) sy raketa. Rehefa tonga dia avela ery ambanin'ny kilibe (voamadilo) ny fiara (tsy ny zavatra rehetra no azo avela eo fa andeferana izahay satria misy sakafo sy rano ao anatin'ny fiara). Ka manomboka eny amin'ny kilibe ka hatreo antokontanin'ny sekoly dia hira no nitsenana anay. Io sekoly io no hany tranovato eo antanàna, ka sady atao sekoly no fiangonana no toeram-pivoriana ihany koa. Mafana ny andro (na dia efa ririnina aza) koa dia ao no nanapa-kevitra hisakafo. Teny am-pamonjena ny aloka izay nisy seza nilahadahatra teo anoloan'ny toerana malaladalaka izay novaina ho lapihazo dia tsikaritro tery alavidavitra tery ireo mpandrasa hena. Lohan'osy roa no hitako mikodia eo anilany eo... osy izany no ho laoka androany.
Tsy niandry ela dia nanomboka ny vakodrazana (izany moa no iantsoana an'ireny?). Hira sy dihy mampiavaka ny foko Mahafaly. Heno any anatin'ny hira any tsindraindray ny anaranay . Efa nifampizarazara tarika isa-paritra ry zareo. Dia nisy koa ny anjaran'ny ankizy sy ny lehibe. Ary isaky ny mahavita ny faritra iray dia mitondra fanomezana, osy, akoho, sns... Ireny moa dia ajanonay ho ao antanàna ihany rehefa avy eo hivantanana amin'ny manaraka, rehefa tsy misy fety.
Tsy tsaroana akory dia vita daholo ny fampisehoana rehetra dia niroso tamin'ny sakafo. Tsy misy latabatra fa dia samy nitazona ny lovia teny amin'ny sezany. Tsy azoko ny haiko ka dia namonjy nipetraka tamin'ny tany aho... dia samy nibosibosika teo daholo.
Dinidinika no natao ny tolakandron'io. Fangatahana sesilany avy amin'ireo loholona teo amin'ny tanàna. Fanafody, fitaovam-pampianarana, vovondrano, izay samy nampanantenaina fa hitadiavana hevitra daholo.
Dia nody izahay nony hariva ny andro...
Dia izay ny sombin'ny vaintisisy tamin'ny taona 1998 tao amin'ity tanana kely iray ity. Any aoriana any aho mbola handalo any hijery ny fivoaran'ny tanana. Henoko fa efa nametrahana vovondrano teo anilan'ny tanàna ka tsy mandeha lavitra mamonjy renirano intsony ry zareo rehefa mantsaka rano hosotroina. Henoko koa fa misy mpampianatra izay karakarain'ny fiangonana mipetraka ao.